Angola: Ny herisetra ao an-tokantrano no mitombo sa ny fahatsiarovantena? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2009 10:12 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Italiano, Español, 简体中文, 繁體中文, English
Araka ny karazana loharanom-baovao an-gazety, dia tena mitombo aok'izany ny tahan’ny herisetra ao Angola. Saingy ny isa tokoa ve no nitombo sa ny toe-javatra no mihamivandravandra amin'ny mahaheloka azy? Taratra fa nahitana toe-javatra miisa 640 voarakitra tamin’ny taona 2008, 424 tamin’ireo olana ireo ihany no voavaha tamin’ny alalan’ny fifanakalozan-kevitra raha toa ka tsy maintsy nomena an-tanana ny fitsarana ny ambiny. Betsaka noho ny antontan'isa nisy tamin’ny taona 2007 ireo isa voalaza etsy ambony ireo izay mampiseho ny zava-misy fa matahotra ny hitory ireo olona mpampijaly azy ireo olona iharan'ny vono. Soritr’endrika tsara izany: Raha mihabetsaka ny fitoriana dia hamarana haingana ny herisetra manjo ireto vehivavy Angoley ireto – na ry zareo araraotin’ireo vadiny na araraotin’ireo sakaizany (sipany) izany fihetsika izany.
Mampalahelo araka ny efa niheverana azy ny tantara. Indraindray mahay mamarana izy ireo – rehefa voafonja ny mpanao herisetra ary afaka tamin'ny fampijaliana sy herisetra ara-batana ireo vehivavy ireo. Indrisy fa mbola misy ihany koa ny tantara ratsy fiafara. Manana ny tantaran'ny vehivavy maty eo ampela-tanan'ny nitokisany maro dia maro i Angola. Mihevitra manko ireto lehilahy ireto fa fananany ny vadiny na ny sipany. Mamono ireto lehilahy noho ny fahasarotampiaro, ary mahafaty mihitsy.
Mpanampy antsoina hoe Nely 20 taona, no mba nanam-bintana. Milazalaza amintsika ny tantarany ao amin'ny blaogin’i Diário da África na Diarin'i Afrika
Nalaina sary ny lamosiny, ny tanany sy ny tongony androany maraina, feno fery mivalo-mainty sy volomparasy ireo faritra rehetra ireo noho ny kapoka nataon’ny vadiny taloha. Tamin’ny vatan-kazo no nanalan'i Amancio (anaran’ilay mpisetrasetra) ny hasosorany. Nanomboka tamin’ny 6 maraina ny fampijaliana raha naharay antso an-telefonina avy any amin’ny mpifanolobodirindrina taminy i Nely sao afaka mitondra azy hiasa ranamana. Nentin-katezerana noho ny fahasarotampiarony ilay vady mpampijaly ka nidaroka an'i Nely.
Na dia teo aza ny daroka nataony dia mbola ingahy mpisetrasetra indray no nitory an'i Nely tany amin'ny polisy niampanga azy ho nandidy tamin’ny antsy. Toy izao ny fitantarany: “Izy tenany ihany no nandidy ny tenany tamin’ny antsy nandritra ny fisafotofotoana ary avy eo nankeny amin’ny polisy mba hitory an’I Nely. Sahirana i Nely mandeha noho ny dona nahazo ny lohaliny anankiray. Hitory noho ny herisetra nahazo azy amin’ny alalan’ny Fikambanan'ny vehivavy Angoley I Nely – OMA no anaran'ilay fikambanana miaro ny zon'ny vehivavy manana fifandraisana amin'ny fitondrana Angoley. Manantena aho amin’ity indray mitoraka ity fa any am-ponja no hiafaran'i Amancio.”
Indrisy, araka ny mety ho hita eny amin’ny faritra hafa sasany eto amin’izao tontolo izao dia tsy manana lalàna matanjaka mikasika ny herisetra an-tokantrano I Angola, lalàna ahafahana manadihady ny toe-javatra toy izao mba ahazoana misambotra ny mpanao herisetra. Navotsotra i Amancio vadin’I Nely, ary nampanatena fa hanohy ny levileviny. Nopotehiny avokoa ny atontan-taratasin'i Nely ary nalefany hotezain'ny fianakaviany any Sao tome sy Principe ny zanak'izy ireo vavy.
Afaka madiodio ny vadiny taloha. Nandeha nilamina izy rehefa avy namono an’I Nely tamin’ny vatan-kazo. Ary dia nandrahona ny hody. Manantena izahay ankehitriny fa hanao ny asany ny sampan'ny polisy miaro ny vehivavy. Ary hampiditra atontan-taratasy hiampangana ity lehilahy ity, ka ny lalàna anie no hampiharina aminy tamin’ny famonoana fanaony ka hitondra azy any am-ponja. Ny fivoaran'ny toe-draharaha no nahaliana [anay]. Manomboka mivazavaza amin'i Nely izy aloha, avy eo mandeha ny totohondry, manaraka izany ny daroka ka nahatonga an'i Nely tsy ho tafarina. Ankehitriny, misy indray ny langilangy sy ny antsy. Dia ahoana koa ny manaraka?
Fahafatesana no mety hiandry azy na ilay mpampijaly. Misy vehivavy vitsivitsy mahafaty ny vadiny mba ahafahany miery ny loza. Marihana koa anefa fa misy ny vehivavy mamono vady (lehilahy). Misy izany fa vitsy. Mandritra izany, tokony harafitra ny lalàna mikasika ny herisetra an-tokantrano atsy ho atsy, izay manome fampahafantarana ny tranga toy itony, ary hanoro lalana ny tokony ataon'ny vehivavy Angoley.